መዝሙር 21 NASV – Nnwom 21 AKCB | Biblica
መዝሙር 21 NASV – Nnwom 21 AKCB
1Awurade, ɔhene di anigye wɔ wʼahoɔden mu.
Nʼani gye mmoroso wɔ nkonimdi a woma no nti!
2Woama no nea ne koma pɛ;
woamfa nʼabisade ankame no.
3Wode nhyira a edi mu hyiaa no
na wode sikakɔkɔɔ ankasa ahenkyɛw hyɛɛ no.
4Obisaa wo hɔ nkwa, na wode maa no,
nna tenten a enni awiei.
5Nkonimdi a woma no nti, nʼanuonyam so;
wode kɛseyɛ ne nidi adom no.
na woama no ahosɛpɛw wɔ wʼanim anigye mu.
Ɔsorosoroni no nokware dɔ no nti,
8Wo nsa bɛka wʼatamfo nyinaa;
wo nsa nifa beso wɔn a wokyi wo no mu.
9Bere a wubeyi wo ho adi no
wobɛyɛ wɔn sɛ fononoo a mu adɔ.
Awurade fi nʼabufuwhyew mu bɛmene wɔn,
na ne gya no ahyew wɔn.
na wɔn asefo afi adesamma mu.
11Ɛwɔ mu sɛ wɔbɔ pɔw tia wo
na wɔyɛ nhyehyɛe bɔne, nanso wɔrenni nkonim;
12efisɛ wobɛma wɔasan wɔn akyi
bere a woatwe bɛmma akyerɛ wɔn so no.
13Yɛma wo so, Awurade, wɔ wʼahoɔden mu;
AKCB : Nnwom 21